Izaho dia mpiara-miasa amin'ny Affiliate ary efa ela Depositphotos. Izy ireo dia manana sary tsy azo inoana, sary fisie (EPS), ary horonan-tsary ao amin'ny tranonkalany miaraka amin'ny vidiny sy fahazoan-dàlana miavaka. Ity misy fomba fampiasako ny Google Image Search hahitako ireo vohikala fanampiny ao amin'ny tranokalan'izy ireo izay mitovy amin'ny endrika mitovy.
Ny dingana voalohany dia ny fampiasana Fikarohana Google an'ny Google. Ny rohy ho an'ity dia eo amin'ny zoro ambony ambony amin'ny pejy fandraisana Google.
Fikarohana Google an'ny Google manome kisary fampakaram-pahefana ahafahanao mampakatra ny sary ohatra izay tadiavinao. Misy ihany koa ny safidy hametahana URL sary raha fantatrao ny toerana ipetrahan'ny sary eo amin'ny tranokalanao.
Raha azo atao, azonao atao koa ny manampy teny hafa raha tianao, fa matetika aho tsy rehefa mikaroka vatan-kazo mba hahitako ireo tranomboky feno vongana mitovy aminy ampidinina sy hampiasaiko.
Fampahafantarana: Mampiasako ny rohy ifandraisako amin'i Depositphotos ao amin'ity lahatsoratra ity.